Etu ị ga-esi nwetaghachi ozi ehichapụ Snapchat na iPhone na android
Echefula Snapchat Ozi na iPhone ma ọ bụ ekwentị ekwentị? Mụta otu esi agbake ozi ederede ehichapụ / echefula Snapchat.
Snapchat ngwa bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa ngwa na ekwentị gị. Ngwa a ga - enyere gị aka ijikọ na ndị ezinụlọ na ndị enyi site na ịkesa ozi ederede, vides na foto. Agbanyeghị, snapchat nwere ike ihichapụ ozi, vidiyo ma ọ bụ eserese ị natara ma ọ bụ zipu na sekọnd 10. Ọ nwere ike na-akụda mmụọ ma ọ bụrụ na ịnweghị ịchekwa ha na ihuenyo nkata dịka ọ ga-ehichapụ ha kpamkpam. Ọzọkwa, kedụ ihe nwunye gị ma ọ bụ aghụghọ gị na Snapchat na-eme? Gaghị ahụ ihe akaebe ọ bụla ma ọ bụrụ na ha bụ Isiokwu a ga - enyere gị aka ịza ajụjụ a - otu esi eweghachi ozi ọ bụla ihichapụ snapchat site na iPhone ma ọ bụ ekwentị gam akporo.
Teknụzụ dị ezigbo mkpa maka ekwentị gị. Taa, ọ dị mfe iweghachite foto snapshot furu efu. Enwere ike iweghachite ozi ndị a na iPhone Data Recovery na gam akporo Data Recovery. Ngwá ọrụ ndị a nwere ike ịrụ ọrụ ọfụma nke ga-enyere aka weghachite ozi snapchat ehichapụ ma ọ bụ nke furu efu. Ihe mbu ị kwesiri ime bu nbudata na wụnye Iweghachite Data Data iPhone or Iweghachite Data Weghaara na PC ma ọ bụ Mac. Soro ntuziaka dị ka n'okpuru.
Otu esi achọta ozi ehichapụ Snapchat na iPhone
nzọụkwụ 1. Ẹkedori iPhone Data Recovery na jikọọ iPhone na PC gị.
nzọụkwụ 2. Jiri eriri USB jikọọ iPhone gị na PC ma ọ bụ Mac. Na akpaghị aka ga-ejikọ ngwaọrụ gị.
nzọụkwụ 3. Họrọ iPhone Data Recovery na isi menu.
nzọụkwụ 4. Pịa bọtịnụ mmalite iji nyochaa iPhone gị. Site n'ime nke a, a ga-egosipụta data gị niile. Iji tulee ozi zuru oke gaa na kọlụm aka ekpe. Ya mere, ị ga - enwe ike ịnweta ọdịnaya niile gụnyere ozi snapchat.
nzọụkwụ 5. Họrọ ozi snapchat wee bido nweghachite. Họrọ ozi niile ịchọrọ ịchọrọ naghachi. Na iPhone gị họrọ faịlụ nke ị ga - eji zọpụta ozi snapchat.
Etu ị ga-esi nwetaghachi ozi ehichapụ Snapchat na gam akporo ekwentị
Iweghachite data gam akporo bu ihe di nkpa ma obu ihe enwetara. Ọ na-arụ ọrụ site n'inyere gị aka weghachite ozi furu efu ma ọ bụ ehichapụ na snapchat android gị n'ụzọ dị mfe na ndị ọkachamara. Ọ bụghị naanị na iji teknụzụ a na-eji snapchat eme ihe naanị mana ị nwekwara ike iji na vidiyo, foto, ndekọ ndekọ, kọntaktị na ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe mbu ime bu ibudata ma wunye nke a snapchat mgbake maka gam akporo. N'okpuru bụ ntuziaka inyere gị aka.
nzọụkwụ 1. Gbaa sọftụ ma họrọ inwetaghachi ozi
Iji eriri USB ikwunye ekwentị gị na PC ma ọ bụ Mac. Ozugbo achọtara USB n'ime ngwaọrụ gị, mee ka USB debugging nwee ike họrọ ozi kọntaktị site na taabụ.
nzọụkwụ 2. Họrọ ozi ma gbanye ekwentị gam akporo gị nke ọma
Ọ bụ ọrụ nke usoro ihe omume iji gbanye ngwaọrụ gị na ozugbo ozugbo emere nhọrọ. Site na ohere ọ bụla ada ada na ngwaọrụ gị; gị, ya mere, ịchọrọ iji aka gbanye mgbọrọgwụ. Teknụzụ ahụ ga - enyere aka nyochaa nyocha ndị ehichapụ ma a ga - enweta ya naanị site na isoro ntuziaka a ngwa ngwa.
nzọụkwụ 3. Naghachi ehichapu snapchat ozi
Ozugbo ị gafere site na ịgbanye na nhọrọ, ị nwere ike ịlele ugbu a ị tufuru snapchat ozi ngwa ngwa. Naanị ihe ị kwesịrị ime bụ iji họrọ ihe ndị ị ga-achọ iji naghachi na tab mgbake button nwere ohere nke ịlele furu efu ma ọ bụ ehichapụ snapchat ozi.
Otu esi nwetaghachi foto Instagram nke ehichapụ Instagram
Etu ị ga-esi nwetakwa Kik ozi ehichapụ ma ọ bụ Akụkọ Nkata
Otu esi nwetaghachi ozi ehichapụ WhatsApp
Etu aga-esi nwetaghachi ozi ehichapụ na Facebook ozi